Kusuka ku-Android Apple Pie kuye ku-Android Nougat, ukubuyekezwa komlando wonodoli be-Android | Izindaba zamagajethi
Kusuka ku-Android Apple Pie kuye ku-Android Nougat, ukubuyekezwa komlando wonodoli be-Android
Izolo iGoogle yenze ngokusemthethweni igama elisha lenguqulo yayo yakamuva ye-Android, okuze kube manje besikwazi njenge-Android 7.0 noma i-Android N. Ukudumazeka ngokungangabazeki kufakwe cishe wonke umuntu futhi yilokho I-Android Nougat akuyona into ecishe ilindelwe muntu. Futhi, lapho kutholakala inani elijwayelekile iGoogle elibeka kuGoogleplex, ikomkhulu lalo elidumile, le nto yaba yinkinga kwabaningi.
Engadini yamahhovisi akwa-Google onodoli bakwa-Andy baqoqiwe, kuzo zonke izinhlobo ezinayo kanjena (izinhlobo zokuqala zohlelo lokusebenza lwe-Google zazingamelwe ngu-Andy, kepha nge-dessert) futhi singasho ukuthi seyivele imi ngaphezu kwakho konke lokho kukaNougat, okulula kakhulu, umkhuba othathwe yi-giant search njengomthetho.
Sisebenzise iqiniso lokuthi kunguLwesihlanu, sizokwenza ukubuyekeza okufuna ukwazi ngonodoli abakhulu be-Android kanye nezinhlobo ezahlukahlukene esezifikile emakethe. Lungela ukuthola izinto ezithakazelisa kakhulu nezinelukuluku, phakathi kwazo okukhona, ngokwesibonelo, igama lenguqulo yokuqala ye-Android, i-Android Pie nokuthi mhlawumbe ikhombe ngqo kuCupertino.
Lapha sikukhombisa ifayili le- igama lazo zonke izinhlobo ze-Android ezifinyelele emakethe, kanye nokuhunyushwa kwayo ngendlela yobumnandi kuye eSpain;
I-Apple Pie (1.0): I-Apple Pie
Isinkwa Sobhanana (1.1): Isinkwa Sikabhanana
Amakhekhe (1.5): Amakhekhe
IDonathi (v1.6): Idonathi noma idonathi
I-laclair (v2.0 / v2.1): I-Pepito noma umbani
I-Froyo (v2.2): I-yogurt efriziwe
Isinkwa se-ginger (v2.3): Isinkwa se-ginger
Uju lwezinyosi (v3.0 / v3.1 / v3.2): Uju lwezinyosi
I-Ice Cream Sandwich (v4.0): Ice Cream Sandwich
I-Jelly Bean (v4.1 / v4.2 / v4.3): Ibhontshisi ye-jelly noma i-gumdrop
I-KitKat (v4.4): Kit Kat
ILollipop (v5.0 / v5.1): iLollipop
IMarshmallow (v6.0): IMarshmallow noma ifu
INougat (v7.0): INougat
Njengoba besesikutshelile ngaphambili AbakwaGoogle banqume ukudala unodoli ohlukile kaAndy kunguqulo ngayinye ye-Android kusukela ku-Ice Cream Sandwich. Kuze kube yileso sikhathi ubezilinganisela ekugcwaliseni ingadi enkulu yamahhovisi akhe ngamaswidi angadonsi ukunaka cishe kwanoma ngubani. Namuhla ukubhabhadiswa okusemthethweni kwenguqulo ye-Android esemsebenzini no-Andy, akuqondakali ngaphandle kwesithombe esifanele, ukuthi lokhu bekulahlekelwa okwangempela eminyakeni edlule.
Uma ufuna ukuthola ukuthi yimaphi ama-Andys ehlukene esikwazile ukuwabona, hlala nathi ngoba sizothola unodoli wenguqulo ngayinye ye-Android ekhishwe emakethe. Futhi sikulinde ekugcineni kwendatshana ukuze usitshele ukuthi yini unodoli noma ilogo ka-Andy ebikade uyithanda kakhulu kunakho konke esikubonile.
1 I-Android Ice Cream Sandwich
2 I-Android Jelly Bean
3 I-Android KitKat
4 I-Android Lollipop
5 I-Android Marshmallow
6 I-Android Nougat
I-Android Ice Cream Sandwich
Ngenguqulo I-Ice Cream Sandwich I-Android iqale isinyathelo seGoogle sokufihla u-Andy ngenguqulo ngayinye yohlelo lokusebenza. Kuze kube manje, i-giant search ibiphethe ukubeka ushukela ohambisanayo njengesithonjana senguqulo ngayinye ye-Android.
Ngokufika kwale nguqulo emakethe U-Andy waphenduka isemishi lika-ayisikhilimu, wapaka okuluhlaza okwejwayelekile nokushiyela umlando esinye sezithonjana ezinozwela kakhulu futhi zoqobo.
I-Android Jelly Bean
Isibalo se U-Andy oguqulwe waba yiJelly Bean omkhulu ngokungangabazeki ungomunye wamalogo nezibalo esizithande kakhulu kunakho konke esikubonile kuze kube manje. Njengokulangazelela singakutshela ukuthi idizayini yokuqala bekungeyona eyokugcina nokuthi iGoogle iyishintshe kaningi, yaze yasala njengoba sibona esithombeni ngenhla.
Lesi sibalo ngokungangabazeki yisampula iGoogle ekwaziyo ukukwenza okuningi ngesithonjana sayo, nokuthi iNougat noma iMarshmallow kusekude ngeminyaka embalwa kusuka kumanani eminyaka edlule.
I-Android 4.4 ibiyinguquko enkulu yohlelo lokusebenza lweGoogle, futhi kusengenye yezinguqulo ezisetshenziswa kakhulu namuhla. Futhi bekungokokuqala ukuthi iGoogle inqume ukwamukela uxhaso lwesoftware yayo. Igama elinikezwe le nguqulo ngu- I-Android KitKat futhi futhi lo mdondoshiya wenza ilogo, okuyi ububona uxhaso yonke indawo, kodwa lokho kwakungokoqobo impela.
Umkhankaso wokukhangisa owaqalwa nguNestlé wawumkhulu kakhulu futhi saze sabona noAndy endaweni yokucwala ushokoledi ethandwayo. Impela uma ubheka esitolo usengabona iKitKat ependwe ngokuluhlaza noma enye yamabha eshokoledi athandwayo aphenduke u-Andy.
cunt I-Android Lollipop I-Google kubonakala sengathi ithathe isinqumo sokuqeda izibalo ezisetshenzisiwe, ezinhle futhi ngokuthinta okwangempela. Kulesi senzakalo u-Andy wayephethe i-lollipop kuphela kwesinye sezandla zakhe, kude kakhulu nalokho esingakubona, ngokwesibonelo nge-Android KitKat noma i-Android Jelly Bean.
Kufanele futhi sizibuze ukuthi u-Andy "uzodla kanjani" kulelo lollipop elikhulu kakhulu nje elikhulu kunodoli osayizi wakhe.
I-Marshmallow kwakungeyona inguquko kunoma iyiphi inhlonipho futhi kunjalo Isithonjana sale nguqulo ye-Android asizange sithathe isikhathi eside ukuthi i-Google siyidale. Futhi ngukuthi u-Andy uphethe nje ifu elikhulu ezandleni zakhe. Okulula, okuqondile futhi lokho ngokuqinisekile akuthathanga isikhathi esiningi kumuntu ophethe ukuyidala.
Angisiye umklami futhi angisiqambi, kepha ngicabanga ukuthi bekungeke kube nzima kakhulu ukuguqula u-Andy abe yifu elikhulu elibomvana, into ebizodonsa ukunakekela kwawo wonke umuntu.
Ekugcineni sifika esibalweni sika-Andy esethulwe izolo nokuthi njengoba ubona esithombeni kulula kakhulu futhi lokho ku UGoogle uthathe isinqumo sokushiya u-Andy njengoba ejwayele, ulayisha izingcezu ezimbalwa ze-nougat ngemibala ehlukene. Zikuphi lezo zibalo ezimangazayo nezifuna ukwazi kakhulu?
Yisiphi isibalo noma ilogo ye-Android oyithanda kakhulu kunabo bonke labo esikwazile ukubabona kule minyaka embalwa edlule?. Sitshele esikhaleni esibekelwe ukuphawula kulokhu okuthunyelwe noma nganoma yimaphi amanethiwekhi omphakathi esikhona kuwo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Android » Kusuka ku-Android Apple Pie kuye ku-Android Nougat, ukubuyekezwa komlando wonodoli be-Android
Izinketho ezi-5 eziphezulu ku-Evernote njengabaphathi bomsebenzi
Lokhu yikho konke esikwaziyo nge-Samsung Galaxy Note 7 entsha